China kpaliri Q235 Steel Scaffolding Staircase maka Scaffolding System Manufacturer and Supplier | Sampmax
Kpaliri Q235 Steel Scaff ...
Scaffolding Self-emechi Sa ...
Steepụ Galvanized Q235 maka Scaffolding System
Ihe mgbago mgbago ụlọ bụ steepụ ndị a na -eji na sistemụ nrụpụta ihe. Ihe mejupụtara ya gụnyere nzọ ụkwụ na nko. A na -agbakọ ha ma debe ha na ọkpọ ọkpọ nchara nwere mkpachị iji mepụta steepụ staffolding.
Ihe: Q235 ígwè
Ibu ibu: 19.5-26.5 n'arọ
Ọgwụ dị n'elu: mikpuo ọkụ kpaliri/tupu galvanizing
Ọkpụrụkpụ nke tube: 1.0-2.0mm
Ọkọlọtọ: AS/NZS 1576.3: 2010
Obosara: Ogologo 450mm
Arọ: 19.5-26.5 n'arọ
Ọgwụgwọ elu: mikpuo ọkụ kpaliri/tupu galvanizing
Dayameta: Ogologo: 30*50mm
Nchara steepụ Scaffolding
Ihe mgbago mgbago ụlọ bụ steepụ ndị a na -eji na sistemụ nrụpụta ihe. Ihe mejupụtara ya gụnyere nzọ ụkwụ na nko. A na -agbakọ ha ma debe ha na ọkpọkọ nchara dị mma nwere mkpachị iji mepụta steepụ staffolding. Anyị nwere ike hazie ihe nrịgo dị elu dị iche iche dịka nkọwapụta nke steepụ ihe nrụpụta ụlọ si dị.
N'iji ya tụnyere alloy aluminom, ubube igwe anaghị agba nchara dị arọ ma ọ naghị adabara ya
rụọ ọrụ, mana ọ dị ọnụ ala ma dịkwa irè.
Nke gara aga: Scaffolding Swivel Castor Wheel maka Scaffolding
Osote: Aluminium Scaffolding Plank dị ka Board Walk maka Scaffolding System
Scaffolding nke Aluminom steepụ
Sistemụ nkwalite Kwikstage maka sca dị oke mkpa ...
Sistemụ mgbanaka mgbanaka mgbanaka maka ọrụ ọ bụla
Steel Scaffolding plank na kpaliri n'elu ...
Kpaliri Scaffolding Steel Pipe maka scaffoldi ...
Ụdị osisi osisi maka ịwụsa ala
Aluminium Formwork Sistem